ဒီအချက် (၄)ချက်ကို သူနာပြုဆရာမလေးတွေသာ နားလည်နိုင်မှာပါ။ - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ… သူနာပြုတွေဆိုတာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်သလို ဆေးပညာလောက ပြီးပြည့်စုံစေနိုင်ဖို့ မရှိမဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်နေရသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက် နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံသွားရတယ်ဆိုပါစို့… ကိုယ်ဘယ်လို နေရ၊ ထိုင်ရမယ်၊ ဘာတွေကို ရှောင်ရမယ်ဆိုတာကစ သူနာပြုလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ နည်းပြလမ်းညွှန်မှုတွေ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမို့ လူနာတွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးက သူနာပြုတွေလို့ ဆိုရင်မမှားပါဘူးနော်… ဒီတော့ မင်မင်ကနေ ယောင်းတို့ကို အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ သူနာပြုလေးတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့် အရာတွေကို ယောင်းတို့အတွက်ပါ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘဝက ကျိုးပျက်လွယ်တယ်ဆိုတာကို အရှိအတိုင်း လက်ခံထားကြပါတယ်။
ယောင်းတို့ရဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးတွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အို၊နာ၊သေ ဒုက္ခတွေကို အချိန်နဲ့အမျှ တွေ့ကြုံနေရတာ ဖြစ်လို့ ဘဝနေဝင်ချိန်အတွက် သံဝေဂတရားဆိုတာ အထွေအထူး ရှာနေစရာကို မလိုတော့တာပါ…. နေ့မြင်ညပျောက်နဲ့ အသက်အရွယ်မရွေး သေခြင်းတရားနဲ့ ကြုံနေရာတာတွေကို မျက်မြင်တွေ့ကြုံနေရတာမို့ ဘဝဆိုတာ ကျိုးပျက်လွယ်လို့ သူတို့လက်ခံထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> အဆောင်နေသူတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့်အရာ(၇)ခု
အဝတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်က အဆန်းတကြယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
မင်မင်တို့ ယောင်းတို့ဆိုရင် အဝတ်ဗလာနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာများတွေ့ကြုံလိုက်ရရင် ရှက်ရွံ့စရာတစ်ခုလို ဖြစ်နေပေမဲ့ သူနာပြုတွေအတွက်ကတော့ သူနာပြုပညာကို စတင်သင်ယူချိန်ကစပြီး ဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာတွေကို ဆေးပညာအမြင်နဲ့သာ ရှုမြင်သလို မထူနိုင်မထနိုင်တဲ့ နာမကျန်းသူတွေကိုလည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးနေရတာမို့ သူတို့အတွက် ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်က လုံးဝကို မဆန်းကြယ်တော့ပါဘူးယောင်းရေ…
ပေါ့ပါးပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်တွေကိုပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။
သူနာပြုတွေက ရှည်လျားတဲ့ဂျူတီချိန်တွေကို မရပ်မနားထမ်းဆောင်ရသလို အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင်လည်း ခုဆိုခု ချက်ချင်း အပြေးအလွှားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့ ပေါ့ပါးပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ဖိနပ်တန်ဖိုးကို ပိုပြီးနားလည်ကြသလို အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာလည်း ဒီလိုဖိနပ်မျိုးတွေသာ ဝတ်ဆင်ဖို့ ပိုပြီးအားသန်လာကြပါတယ်တဲ့။
Related Article >>> ဂိုက်ဆရာမလေးတွေ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲ(၅)ချက်
သူနာပြုတွေဟာ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ လူနာတွေနဲ့ နိစ္စဓူဝ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတော့ ဝေဒနာဒဏ်တွေကြောင့် စိတ်မကြည်လင်ဖြစ်နေတဲ့ လူနာတွေအကြောင်းဆိုတာလည်း နောကြေနေတာပေါ့… ဘယ်လိုပြောပြော၊ ဘယ်လိုဆိုဆို သူတို့ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးပြီး ကိုယ့်ဘက်က သည်းခံရတာကို ကျင့်သားရလာရင်းကနေ အရာရာကို အကောင်းပိုမြင်တတ်လာကြပါသေးတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ..
ကဲ… ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ယောင်းတို့နဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ သူနာပြုလေးတွေသာ နားလည်နိုင်မယ့်အရာတွေကို အနည်းအကျဉ်းတော့ တီးခေါက်မိသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မင်မင်တို့ ရေးထားတယ်ဆိုတာ အပေါ်ယံပဲ ရှိသေးတာလေနော်… တခြားအကြောင်းအရာတွေဆိုတာလည်း အများကြီး ရှိနိုင်သေးတာမို့ ယောင်းတို့ သိနားလည်ထားတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးတွေအကြောင်းလည်း မင်မင်တို့ကို မျှဝေပေးသွားပါဦးလို့…
မငျမငျ ထငျမှတျမထားတာတှေ မြားတာပဲ
ယောငျးတို့ရေ… သူနာပွုတှဆေိုတာ လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အသိုကျအဝနျးတဈခုဖွဈသလို ဆေးပညာလောက ပွီးပွညျ့စုံစနေိုငျဖို့ မရှိမဖွဈ ပါဝငျအားဖွညျ့နရေသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။ တဈစုံတဈယောကျ နမေကောငျးလို့ ဆေးရုံသှားရတယျဆိုပါစို့… ကိုယျဘယျလို နရေ၊ ထိုငျရမယျ၊ ဘာတှကေို ရှောငျရမယျဆိုတာကစ သူနာပွုလေးတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတှေ နညျးပွလမျးညှနျမှုတှေ မရှိမဖွဈလိုအပျတာမို့ လူနာတှနေဲ့ အနီးစပျဆုံးက သူနာပွုတှလေို့ ဆိုရငျမမှားပါဘူးနျော… ဒီတော့ မငျမငျကနေ ယောငျးတို့ကို အနီးကပျပွုစုစောငျ့ရှောကျပေးနရေတဲ့ သူနာပွုလေးတှသော နားလညျနိုငျမယျ့ အရာတှကေို ယောငျးတို့အတှကျပါ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ဘဝက ကြိုးပကျြလှယျတယျဆိုတာကို အရှိအတိုငျး လကျခံထားကွပါတယျ။
ယောငျးတို့ရဲ့ သူနာပွုဆရာမလေးတှကေ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အို၊နာ၊သေ ဒုက်ခတှကေို အခြိနျနဲ့အမြှ တှကွေုံ့နရေတာ ဖွဈလို့ ဘဝနဝေငျခြိနျအတှကျ သံဝဂေတရားဆိုတာ အထှအေထူး ရှာနစေရာကို မလိုတော့တာပါ…. နမွေ့ငျညပြောကျနဲ့ အသကျအရှယျမရှေး သခွေငျးတရားနဲ့ ကွုံနရောတာတှကေို မကျြမွငျတှကွေုံ့နရေတာမို့ ဘဝဆိုတာ ကြိုးပကျြလှယျလို့ သူတို့လကျခံထားပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> အဆောငျနသေူတှသော နားလညျနိုငျမယျ့အရာ(၇)ခု
အဝတျမဲ့ခန်ဓာကိုယျက အဆနျးတကွယျ မဟုတျတော့ပါဘူး။
မငျမငျတို့ ယောငျးတို့ဆိုရငျ အဝတျဗလာနဲ့ ကိုယျခန်ဓာမြားတှကွေုံ့လိုကျရရငျ ရှကျရှံ့စရာတဈခုလို ဖွဈနပေမေဲ့ သူနာပွုတှအေတှကျကတော့ သူနာပွုပညာကို စတငျသငျယူခြိနျကစပွီး ဒီလိုကိုယျခန်ဓာတှကေို ဆေးပညာအမွငျနဲ့သာ ရှုမွငျသလို မထူနိုငျမထနိုငျတဲ့ နာမကနျြးသူတှကေိုလညျး ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျပေးနရေတာမို့ သူတို့အတှကျ ဒီလိုခန်ဓာကိုယျက လုံးဝကို မဆနျးကွယျတော့ပါဘူးယောငျးရေ…
ပေါ့ပါးပွီး သကျတောငျ့သကျသာဖွဈတဲ့ ဖိနပျတှကေိုပဲ ကွိုကျနှဈသကျကွတယျ။
သူနာပွုတှကေ ရှညျလြားတဲ့ဂြူတီခြိနျတှကေို မရပျမနားထမျးဆောငျရသလို အရေးပျေါအခွအေနမြေိုးတှဆေိုရငျလညျး ခုဆိုခု ခကျြခငျြး အပွေးအလှားတာဝနျထမျးဆောငျရတော့ ပေါ့ပါးပွီး သကျတောငျ့သကျသာဖွဈစတေဲ့ ဖိနပျတနျဖိုးကို ပိုပွီးနားလညျကွသလို အလုပျခြိနျပွငျပမှာလညျး ဒီလိုဖိနပျမြိုးတှသော ဝတျဆငျဖို့ ပိုပွီးအားသနျလာကွပါတယျတဲ့။
Related Article >>> ဂိုကျဆရာမလေးတှေ ရငျဆိုငျရတဲ့အခကျအခဲ(၅)ခကျြ
သူနာပွုတှဟော နာမကနျြးဖွဈတဲ့ လူနာတှနေဲ့ နိစ်စဓူဝ ထိတှဆေ့ကျဆံနရေတော့ ဝဒေနာဒဏျတှကွေောငျ့ စိတျမကွညျလငျဖွဈနတေဲ့ လူနာတှအေကွောငျးဆိုတာလညျး နောကွနေတောပေါ့… ဘယျလိုပွောပွော၊ ဘယျလိုဆိုဆို သူတို့ခံစားခကျြတှကေို နားလညျပေးပွီး ကိုယျ့ဘကျက သညျးခံရတာကို ကငျြ့သားရလာရငျးကနေ အရာရာကို အကောငျးပိုမွငျတတျလာကွပါသေးတယျတဲ့ ယောငျးတို့ရေ..
ကဲ… ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ယောငျးတို့နဲ့အနီးကပျဆုံးမှာ ရှိနတေဲ့ သူနာပွုလေးတှသော နားလညျနိုငျမယျ့အရာတှကေို အနညျးအကဉျြးတော့ တီးခေါကျမိသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျ။ တကယျတော့ မငျမငျတို့ ရေးထားတယျဆိုတာ အပျေါယံပဲ ရှိသေးတာလနေျော… တခွားအကွောငျးအရာတှဆေိုတာလညျး အမြားကွီး ရှိနိုငျသေးတာမို့ ယောငျးတို့ သိနားလညျထားတဲ့ သူနာပွုဆရာမလေးတှအေကွောငျးလညျး မငျမငျတို့ကို မြှဝပေေးသှားပါဦးလို့…
Tags: Body, Knowledge, life, nudity, nurse, shifts, shoe, understand